နောက်တဖန်သင်မဝါဂွမ်းအင်္ဂတေနဲ့တူနေလျှင်နှစ်ပေါင်းများစွာ, သင်တစ်ဦးကပုံမှန်အုတ်ရိုးကိုဆေးသုတ်နှင့်အတူဤကျော်ခြယ်လို့ရပါတယ်. ဒီအလမ်းအတွက်သင်တစ်ဦးကောင်းတဲ့ texture အုတ်ရိုးကိုမြေပြင်မှစောင့်ရှောက်. ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအလိုရှိသောသင်တန်းကိုကဲ့သို့မကြာခဏထပ်တလဲလဲနိုင်ပါတယ်.
သို့သော်သတိပြုရန်မှာကျေးဇူးပြုပြီး, သငျသညျကြောင့်မြင့်မားတဲ့ 2-3 နှင့်အတူဝါဂွမ်းအင်္ဂတေအကိုစုပ်ယူအဆပမာဏနှင့်အုတ်ရိုးကိုအရောင်ဖို့မျှော်လင့်ရန်ရှိသည်သော. ထို့အပွငျ, နောက်တဖန်ထိုဝါဂွမ်းအင်္ဂတေ၏အပေါ်ယံပိုင်းပြီးဖယ်ရှားပစ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်, သူခဲယခုစိမ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းက. အပြင်, သင်တန်း၏, အပြုသဘော Attribute တွေ၏အချို့ကိုသွား, သပိတ်အားဖြင့်အသံချဲ့စုပ်ယူနှင့်အစိုဓာတ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအဖြစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ.
ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေ၏အများကြီးပိုအကျိုးရှိ overmolding လတ်ဆတ်တဲ့ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါကအတော်လေးရိုးရှင်းပြီးမှဝင်နှင့်ဒုတိယအ, သင်ဤဥပဒေလည်းအချို့သောအပြုသဘော features တွေအားကောင်းလာစေရန်, မတရားသောသူသည်နှင့်အပူလျှပ်ကာအဖြစ်. ထို့ကြောင့်ဤချဉ်းကပ်မှုပုံစံကိုဦးစားပေးမည်ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေပန်းချီဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျ ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့.
Posted in သိမ်းကျုံးဝါဂွမ်းအင်္ဂတေ, လုပ်ငန်းများ၌ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေ, ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေအပြောင်းအလဲနဲ့ , ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေမျဉ်းသား	| No Comments »
ဝါဂွမ်းနောက်ခံပုံများမှာလည်းသင့်ရဲ့လှေကား wallpapering များအတွက်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်. တယောက်လက်တွင်ပွန်းကြောင့်ဖြစ်ရတာဟာသူ့ရဲ့ပျော့ပျောင်းသောမျက်နှာပြင်ဒဏ်ရာမှတစ်ဆင့်ဝါဂွမ်းထွန်းလင်းကာကွယ်တားဆီး, ဒီအဥပမာအဖြစ်. ကြမ်းတမ်းသောအင်္ဂတေနှင့်အတူပေါ်ပေါက်နိုင်ပါသည်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကမြို့ရိုးအဖို့နည်းနည်းပဲဖုန်သို့မဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှလှေကားလာပေမယ့်မကြာခဏကြိမ်. ဤသည်နောက်တဖန်အအလွန်လွယ်ကူမြန်ဆန်သန့်ရှင်းရေးဝါဂွမ်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူ ကိုပြုပြင်. နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားရှည်လျားလှသောအဆင်းလှေကားကြည့်ရှု.
၏ဟုတ်ပါတယ်, သင့်ရဲ့လှေကားကအရမ်းသီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ဂွမ်းအင်္ဂတေနှင့်အတူတစ်ဦးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်နှင့်ဆင်တူပြီးကိုချက်ချင်းသင့်ရဲ့ဧည့်သည်များအထင်ကြီးလိမ့်မည်, သငျသညျသငျ၏အိမျထဲဝငျလာတဲ့အခါ.
More Information ကို, သင့်ရဲ့လှေကားတိပ်ခွေကိုအလှဆင်ဖို့ဘယ်လောက်, ကြည့်ရှု ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေအပြောင်းအလဲနဲ့.
Posted in Baumwollputz Erfahrung, လုပ်ငန်းများ၌ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေ, ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေအပြောင်းအလဲနဲ့ , စက္ကူလှေကား	| No Comments »
Schön, သငျသညျသိုးမွေးအင်္ဂတေအဘို့ဂရုစိုက်ကြောင်းရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွေ့ရှိရ. သတ်မှတ်ရန်သိုးမွေးအင်္ဂတေလက်အောက်တွင်တစျဝါဂွမ်းအင်္ဂတေကဲ့သို့တူညီသောပစ္စည်းကိုနားလည်ပြီး, ဝါဂွမ်းနောက်ခံပုံများသို့မဟုတ်Flüssigtapete. ထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုကြသည်. ပစ္စည်းကတော့အမြဲတမ်းအတူတူပါပဲကအခြေခံပစ္စည်းများပါဝင်သည် (ဝါဂွမ်း, တစ်ကော် Cellulose နှင့်အမျိုးမျိုးသောအရောင်- နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုသောပစ္စည်းများ).
ဤ website တွင်သင်သည်အရာအားလုံးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်, သငျသညျသိုးမွေးအင်္ဂတေနှင့် ပတ်သက်. သိသင့်အဘယျသို့.
တစ်ဦးကိုအထူးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ကျွန်တော်အဘို့ငါတို့အခမဲ့နမူနာကိစ္စတွင်ကိုဆက်ကပ် 10 ကြည့်ရှုရန်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရက်ပတ်လုံး.
သင်သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ home page ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေ.
Posted in ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေ Buy, ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေစျေးနှုန်းများ | No Comments »
အရည်နောက်ခံပုံများဝါဂွမ်းအင်္ဂတေအဘို့အများအပြား synonym တွေဟာအားဖြင့်ဘုံဖြစ်ပါသည်. ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေနှင့် ဆက်စပ်. အသုံးပြုမှုကြွလာ, ကြောင်းဝါဂွမ်းအင်္ဂတေအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အစိမ်ထားရမညျ. ဒါကအထူအတွက်ရလဒ်များ, mass breiige. ထိုအပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ် မူတည်. အဆိုပါကိုက်ညီမှုအနည်းငယ်ကွာခြားသည်.
တစ် trowel နှင့်အတူလျှောက်ထားခြင်းအဘို့အ (Trowel) ပိုပြီးဖွယ်ရှိမုရှိတည်းကိုက်ညီမှုဖြစ်ပါသည်. Zum Spritzen wird die Flüssigtapete etwas dünner angemischt.
ရေထု၏အကြံပြုထားတဲ့ငွေပမာဏဖော်ပြချက်ထဲတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, အသီးအသီးအိတ်အပေါ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါသည်. လျှောက်လွှာကိုနှင့် preference ကိုအပေါ်မူတည်ပြီး, သင်တို့နှင့်အတူအညီရေကို content တွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်.
အရည်နောက်ခံပုံများကအလွယ်တကူနောက်တဖန်အဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်. ရိုးရှင်းစွာအစီးပွားဖြစ်WassersprühflacheသုံးပြီးFlüssigtapeteစိမ် (စံပြ5liter) အင်တိုက်အားတိုက်နှင့်စိမ်မြေပြင်တွန်းအားပေး, z.B. တစ်ဦးနှင့်အတူ spatula, မြို့ရိုးမှ. အဆိုပါမြေပြင်လုံးဝကို non-အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနဲ့အလွယ်တကူအိမ်သူအိမ်သားအမှိုက်များနှင့်အတူဒါမှမဟုတ်ဆွေးအမှိုက်ပုံပေါ်၏စွန့်ပစ်နိုင်ပါသည်.
နောက်တစ်နည်းသင်သည်လည်းနောက်ထပ် layer ကိုပက်ဖြန်းနိုင်ပါFlüssigtapete.
အရည် Wallpaper အမျိုးမျိုးသောဖြန့်ဖြူးချန်နယ်မှတဆင့်ပူဇော်သော. အသုံးအများဆုံးဖြန့်ဖြူးရုပ်သံလိုင်းနေဆဲကုန်သွယ်ရေးကိုဝိုင်းမှာတင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်, hardware ကိုစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်သင့်အိမ်မှာ. ဒီနေရာတွင်လည်းများသောအားဖြင့်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှု Fair ထို option ရှိသည်. ထိုအပြောင်းအလဲနဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်. သို့သော်အမြင့်ဆုံးသောဖြန့်ဖြူးမှုကုန်ကျစရိတ်စျေးနှုန်းအပေါ်သဘာဝကျကျဖြိုဖျက်ရန်.
ထို့အပြင်တချို့ကုမ္ပဏီတွေကသမားရိုးကျနောက်ခံပုံများအနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်အထူးပြုပန်းချီဆရာများကဒီပစ္စည်းကိုမပူဇော်. သငျသညျအစဉျအမွဲပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ကလျှောက်ထားရန်အချိန်မရှိဘူးဆိုရငျ, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.
ဒါကြောင့်မကြာခဏအွန်လိုင်းရောင်းအားကိုကိုယ်စားပြုသည်အတိုင်းဈေးအပေါဆုံးမူကွဲ,. ဤအမှု၌ရံဖန်ရံခါဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် e-mail အဘို့ကိုသာအနည်းငယ်သာရောင်းအားကုန်ကျစရိတ်ရရှိသော ခုနှစ်မှစ., စျေးနှုန်းနိမ့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း. ဒါက handyman များအတွက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. စင်ကြယ်သောအွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ဈေးနှုန်းများနှင့်အတူရရှိနိုင်သောသင်တို့ပေး, အခြားအဖြန့်ဖြူးချန်နယ်၏ပံ့ပိုးပေးစဉ်, မှုကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသဆိုင်ရာ Price ဖို့လည်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိသင့်ဈေးနှုန်းများveöffentlichenမဟုတ်.
အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတစ်စတုရန်းမီတာလျှင်ပစ္စည်း၏ငွေပမာဏအပြင်. ပင်တစ်စတုရန်းမီတာလျှင်အလေးချိန်ပြီးနောက်စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်လျှင်အဘို့အစဉ်အမြဲထို့ကြောင့်မေးပါ, အရာရောင်းချသူအခြေခံရေးသားထားပါတယ်. ဒါကြောင့်သင်အလွယ်ကူဆုံးမြင်နိုင်ပါသည်, သင်အမှန်တကယ်သင်တို့ငွေကိုအဘို့အရမည်မျှဝါဂွမ်းအင်္ဂတေ.
Flüssigtapeteများအတွက်ဈေးနှုန်းများအွန်လိုင်းကုန်သွယ် CA အတွက်ဖြစ်. 4-15€ je qm. သင်ဟာနှစ်ဆခန့်အတွက်ဒါမြင့်ကြသည် Offline. စင်ကြယ်သောဝါဂွမ်းအရည်နောက်ခံပုံများနှင့် ပတ်သက်. ပါဝင်ပါသည် 80-90% ဝါဂွမ်း, ရရှိနိုင်သောကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာစျေးနှုန်းဖို့အားလုံးကိုပေးသွင်းဖို့ပွင့်လင်းသောအ. အရည်အသွေးကွဲပြားခြားနားမှုထို့ကြောင့်လျော့နည်းဖွယ်ရှိရှိပါတယ်. ရောထွေးပုံစံများ Allerding လည်းရှိပါတယ်, z.B. cellulose နှင့်အတူ, တစ်ဦးက high-quality အဖြစ်တန်ဖိုးထားထို့ကြောင့်လျော့နည်းလည်းစျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်းနိုင်သည့်.
အရည် Wallpaper ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်ဂျာမန်စျေးကွက်အပေါ်ပူဇော်သော. သတင်းရင်းမြစ်ရှိပါတယ်, ဤအကွောငျးအရာ Vilen ဂျပန်နိုင်ငံတွင်တရာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းအသုံးပြုသောပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသောပြီးနောက်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအယူအဆတွေပြီးသားစာအဆက်အသွယ်သောအတိုင်းအတာအထိ, လုံခြုံစိတ်ချစွာခဲယဉ်းအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်.
ဒီအမှုကြောင့်,, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်ဒေသခံလေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့အရည်နောက်ခံပုံများကအလွန်ကိုအလွယ်တကူပြုပြင်ကြစေနိုင်သည်, ကျော်၏ Renoverungsintervalle များမှာ 20 ဖြစ်နိုင်သမျှအနှစ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏တချို့ကတောင်မှအဝတ်လျှော်စက်တစ်အိတ်၌ပစ္စည်းသန့်ရှင်းကြပါပြီ, စာအုပ်ချုပ်သမားနှင့်အတူပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် reapplied. ဤသည်မှာလည်းဖြစ်နိုင်.
ဟူသောဝေါဟာရကိုအရည်နောက်ခံပုံများသည်လည်းအရည် Raufasertapete အသုံးပြုသည်. ဤသည်မှာသို့သော်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပစ်စညျးမြားဖြစ်ပါသည်.
ငါတို့အားဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံတင်ဒါတစ်ခုကိုမှန်ကန်ရုပ်တုကိုလုပ်စေနိုင်မှာမှFlüssigtapete, ရိုးရှင်းစွာ CA နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်သောနမူနာကိစ္စတွင်တောင်းဆိုရန် 100 Musterplatten, တစ်ဦးပစ္စည်းကိုနမူနာ, ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရန်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်နှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များသောပစ္စည်းများ.
Posted in လုပ်ငန်းများ၌ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေ, ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေအပြောင်းအလဲနဲ့, Flüssigtapete, Musterkoffer , Flüssigtapete	|4Comments »
Viele unserer Kunden mögen an unserer Tapete besonders die Glitzereffekte, အရာအခြားမည်သည့် wallpaper ကိုခဲဖြစ်ကောင်းလည်းမရှိ. ဝါဂွမ်းအင်္ဂတေအရောင်တောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းနောက်ခံပုံများမတူကွဲပြားသောအခွင့်အလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏မူထူးခြားတဲ့ features တွေကြောင့်လည်းကမ်းလှမ်း.
Andererseits erhalten Sie auch metallische Glitzereffekte mit unseren Kupfer, ကိုရွှေ- နှင့်ငွေချည်.
ဤသူအကျိုးသက်ရောက်မှုများအားလုံးသည်လဲမှို့နောက်ခံပုံများကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမားရွေးချယ်ရေးအတွက်ပြီးသားအမျိုးမျိုးသောသည့် Composition အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်အရာသငျသညျ www.baumwollputz-shop.de ကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ်နှင့်ပါဝင်သည်ပမာဏ၌တွေ့. ကျွန်တော်တို့ကိုတင်သွင်းအထူးအတောင်းဆိုမှုများမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမကပြဿနာဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော်တို့င့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်ကျနော်တို့ဝါဂွမ်းအခြေခံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ခံပုံများနှင့်အတူသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Glitereffekt ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်.
Posted in Baumwollputz Erfahrung, Baumwollputz Hersteller, ဝါဂွမ်းနောက်ခံပုံများ | No Comments »